असोज तीन ७ दशकदेखिको संघर्ष सकिएको दिन : प्रधानमन्त्री ओली — Bhaktapurpost.com
असोज तीन ७ दशकदेखिको संघर्ष सकिएको दिन : प्रधानमन्त्री ओली
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको अवसरमा शुक्रबार राजधानीको टुडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा आयोजित समारोहलाई गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
लामो संघर्ष र बलिदानपछि पाँचबर्ष अघि आजकै दिन हामीले नेपालको संविधान जारी गरेका थियौं । जनताका आफ्नै प्रतिनिधिहरुद्वारा लेखिएको मुल कानुन– संविधान जारी गरी भएको यस ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा सर्वप्रथम म, नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरु सवैमा पाँचौं संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसको हार्दिक वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । उत्साह र उत्सवको यो उल्लासमय अवसरमा सम्पूर्ण ज्ञातरअज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा वेपत्ता भएका, बेघरवार, शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक रुपमा क्षति व्योहोरी मुलुकलाई विधिको शासनमा बाँध्न अतुलनीय योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण देशवासीप्रति हार्दिक आदरभाव व्यक्त गर्दछु ।
आज म ती प्रतिवद्धतालाई पुनः एकपटक दोहर्याखउने अनुमति चाहन्छु । र, सरकार सञ्चालनको १८ महिनामा भएका उपलव्धिको सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा यस दशककै ७।१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र, सवै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो बृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिको को मार्गमा अघि वढेको संकेत मिलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धिएक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो । भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्ष वाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यस अवधीमा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा– ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा–२०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जामा– २२।२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा– ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
यस अबधीमा विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू. ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदान समेत वितरण गरिएको छ । स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुका शाखा ७ सय ३७ पुगेको छ । मेरो नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा यसको संख्या जम्मा ३ सय ९४ थियो । वैंकहरुका शाखा ५ हजार ८ सय ३७ बाट डेढ बर्षमा नै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई८ हजार ८ सय ५ पुगेको छ ।
भन्नकै लागि त भन्न सकिन्छ नि– खै त रेल, खै त पानी जहाज रु कहाँ छ सुरुङ् खनेकोरु कता छ सतह जलमार्गमा मालवाहक सवारी कुदेको रु अझै जोड दिएरसोध्न सकिन्छ– हामीलाई सपना किन देखाएकोरु हामीमा आशा किन जगाएको ? म बिनम्रताका साथ स्वीकार्छु– हो, मैले मुर्छित सपनामाथि पानी छम्केकै हुँ । मैले भनेको हुँ– निदाएको बेलामा देख्ने सपना हैन, ब्युँझिएको बेलाको सपना देखौं ।
मलाई यसैमा हतारो छ । यो युवा पंक्ति छिप्पिनु अघि विकासको तीब्र गतिको दौड पूरा गर्नुपर्छ । तब मात्रै गणतन्त्र पछिको नेपाली पुस्तालाई भाग्यमानी पुस्ता बनाउन सकिन्छ । मलाई गर्व ती युवा पंक्तिप्रति छ, जसले विभिन्न इनोभेटिभ प्रयासहरु थालेका छन् । कतिले वस्तु उत्पादनबाट, कतिले सेवा सिर्जना गरेर समाजलाई गुन लगाइरहेका छन् । तर मलाई थोरै चिन्ता केही फुर्स्दिलो युवा पंक्तिको पनि छ, जसको ऊर्जा रचनात्मक सिर्जनामा भन्दाबढी सामाजिक सञ्जालमा विना मुद्दाका विषयवस्तुमा हुने परिणामहीन बहसमा व्यतीत भइरहेको छ ।
मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, आजको आवश्यकता उश्रृङ्खलता र अराजकता हैन, सामाजिक सद्भाव, आपसी एकता र सहिष्णुता हो । आजको लडाईं लोकतन्त्रप्राप्तिका लागि हैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र सुदृढ गर्नका लागि हो । पाइला नै नचलाई कसरी दौडनेरु यथास्थितिमा रहेर परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिनेरु रुपान्तरण हैनप्रतिक्रिया, परिणामसँग साइनो नै नहुने प्रक्रियामा किन र कति अल्झिरहनेरुविना–मुद्दाका विषयमा मूल मुद्दा जस्तो बहसरविवादको माहौल किन बनाउनेरुअझै पनि ‘हुँदैनरसकियो’ जस्ता असन्तुष्टिको खेतीलाई उकेराकिन लगाउनेरु अब हामीले तरीका फेर्नैपर्छ ।
नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानी सञ्चालन गर्न धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । सुरुङ्मार्ग, रेलमार्ग, सतह जलमार्ग हुँदै पानी जहाज सपना पूरा गर्ने प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु। ३५ खर्वको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार रु। ५० खर्ब पुर्याइनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी कोही पक्ष वा कोही प्रतिपक्ष होइनौं । यसमा कोही पक्ष, कोही प्रतिपक्ष हुँदैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ । हाम्रो लोकतन्त्र फराकिलो छ, कतिपय अतिवादी सोच र संस्थाहरुलाई पनि यसले यसै अवधिमा मूलधारमा फर्काउन सफल भएको छ । जो अझै बाटो भुलिररहेका छन्, उनीहरुलाई पनि मूलधारमा आउन ढिला नगर्न मेरो आग्रह छ । नयाँ संविधान र त्यस अन्तर्गतको तीनै तहको आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक आन्दोलनको चरण अब समाप्त भएको छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया जारी छ । अब पनि राजनीतिको नाममा शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने काम कहिँ कतैबाट भए संविधान र कानून विपरितका त्यस्ता कुनैपनि गतिविधि सरकारले रोक्छ ।
नागरिकमा लोकतन्त्रको लाभांशको समन्यायिक वितरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले वहन गर्छ । समृद्धिको सिर्जना, यसको सन्तुलन र दिगोपनाका लागि राज्य र नागरिकको बीचमा सदैव उच्चस्तरको समझदारी र एकतामा जोड दिन्छ । यसबाट नै हामी समृद्ध, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्न सक्दछौ भन्ने मेरो विश्वास छ । छिट्टै शुरु हुने दशैंरतिहार सहित विभिन्न चाडपर्वहरुको अग्रिम शुभकामना । धन्यवाद ।